Denmark Oo Maanta War Cusub Kasoo Saartay Xaaladda Eriksen – Garsoore Sports
Denmark Oo Maanta…
Denmark Oo Maanta War Cusub Kasoo Saartay Xaaladda Eriksen
Xulka kubbada-cagta Denmark ayaa war cusub kasoo saartay xaaladda kubbad-sameeye Christian Eriksen kaddib markii uu garoonka dhexdiisa ku dhacay kulankii shalay xulalka Denmark iyo Finland dhexmaray taasoo dhalisay in dunnida kubbada-cagta ay walwal badan ka qabato badqabkiisa.
Denmark ayaa warbixin cusub ka bixisay xaaladda Christian Eriksen kaasoo laga dhexqaaday garoonka qeybtii hore ee kulankii Denmark ay Group B xulka Finland kula cayaareen garoonka Parken Stadium ee magaalada Copenhagen galabnimadii Sabtida.
Eriksen wuxuu u baahday daaweyn caafimaad oo deg deg ah kaddib markii kubbad loo baasay uu dib ugu celiyay saaxiibkii islamarkaan dhulka ku dhacay.
Cayaarta ayaa la hakiyay kaddib kahor inta aan cayaaryahanka khadka dhexe bareelo looga saarin garoonka oo aan loo dirin isbitaalka halkaasoo markii dambe la ogaaday inuu soo jeedo oo uu ku jiro xaalad jireed oo deggan.
Xiriirka Kubbada-Cagta Denmark ee loo soo gaabiyo (DBU) ayaa maanta soo saaray bayaan ay ku xaqiijinayaan in Eriksen uu kusii jiri doono isbitaalka si uu u maro baaritaano dheeri ah, laakiin wuxuu laxiriiray shaqaalaha qaranka iyo asxaabtiisa.
“Saaka waxaan la hadalnay Christian Eriksen, oo salaan u diray asxaabtiisa,” ayaa lagu yiri qoraalka lagu daabacay bogga rasmiga ah ee DBU ee Twitter. ”Xaaladdiisa waa mid deggan, wuxuuna kusii jirayaa isbitaalka si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo.”
TOOS: Belgium vs Russia | EURO 2020
Arsenal Oo Wadahadallo Kula Jirta Nabil Fekir